Toshiba DynaEdge, kọmputa akpa na-eji igwe eji ama anya | Akụkọ akụrụngwa
Toshiba DynaEdge, kọmputa akpa na-eji smart glass
Ruben gallardo | | Ngwaọrụ yi, Kọmputa
Toshiba nọgidere bụrụ otu n'ime ndị isi na ngwaahịa kọmputa na azụmaahịa ụwa. Ihe ikpeazu o gosi anyi bu ngwugwu Toshiba DynaEdge, nke nwere obere komputa obere akpa na ugegbe enyo. Ihe a niile, ọzọ, lekwasịrị anya na ụwa ọrụ yana nke mere na ndị ọrụ nwere aka ha n'efu n'oge niile.
na Wearables Ha bịara ka ndụ dịrị anyị mma karịa. Ọ bụ ahịa na-achịkwa elekere anya, mana obere obere anyị ga-ahụkwu ngwa mgbakwunye agbakwunyere. Anyị na-ekwukwa, dịka ọmụmaatụ, banyere iko. Toshiba chọrọ ka ụdị ọrụ a gbasaa na ụlọ ọrụ. Site na ngwọta a, Japaneselọ ọrụ Japan chọrọ ime ka ụlọ ọrụ na-arụpụta ihe na ndị ọrụ nwere ike ịrụ ọrụ karịa site na ịnwe aka ha n'efu iji rụọ ọrụ.
Nke mbu anyi nwere Toshiba dynaEdge DE-100. Kọmputa a dị nha nke ukwuu. Ọ ga-ewe ohere nke smartphone. Ọzọkwa, obere PC a nwere ọgbọ nke isii Intel Core processor na sistemụ arụmọrụ ọ na-agba bụ Windows 10. N'aka nke ọzọ, PC a pụrụ iche nwere bọtịnụ njikwa anụ ahụ na chassis ya na batrị nwere ike iwepu na otu ụgwọ nwere ike ịnye obodo kwụụrụ ihe ruru awa 5,5, dị ka ụlọ ọrụ ahụ si kwuo.
Banyere smart smart, ọ bụ maka ụdị ahụ Toshiba AR 100 Onye Nlele. Igwe iko ndị a nwere Njikọ WiFi, Bluetooth, tinyere GPS ma enwere ike iji ya n'aka. Ihe nlere Toshiba AR100 ga-enye ndị ọrụ ohere ijikọ na netwọk ụlọ ọrụ, zipu ma nata ozi, bulie vidiyo vidiyo, ma soro akụ. Na, kpachara anya, n'ihi na ọ bụghị naanị na ị nwere ike izipu faịlụ, kamakwa ga-enye gị ohere izipu vidiyo na ozugbo. Nke a ga - abụ ihe dị oke mkpa iji chekwaa oge mgbe ị na - edozi nsogbu ma ọ bụ nsogbu.
A ga-ere Toshiba dynaEdge ngwugwu na Europe site na nkeji nke abụọ nke afọ a 2018. N'oge a egosighi ụgwọ ọ bụla na amabeghị ma ọ bụrụ na dynaEdge DE-100 ga-adị na nhazi dị iche iche.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Kọmputa » Toshiba DynaEdge, kọmputa akpa na-eji smart glass
Site na mophie Powerstation USB-C XXL anyị nwere ike ịgba ụgwọ maka MacBook Pro yana ngwaọrụ ndị ọzọ